मनुष्य थिएन संसारको सबैभन्दा पहिलो कलाकार, ६४ हजार वर्ष पुरानो पेन्टिंग फेला!
एजेन्सी, मानिस नै संसारको पहिलो कलाकार नभएको र मनुष्यको उत्पत्तिभन्दा पहिले अरुको अस्तित्व यस धर्तीमा थियो भन्ने कुराको ज्ञात सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसको सबुत ६४ हजार वर्ष पुरानो पेन्टिंगबाट प्राप्त हुन्छ । यो पेन्टिंग बनाउने वाला आदिमानव निएन्डरथलले कलाकारीता सिकेका थिए। उनले यो पेन्टिंग बनाएको कुरा हालिया अनुसन्धानमा दाबी गरिएको छ । जर्नल साइन्समा प्रकाशित रिपोर्टको अनुसार स्पेनको तीन गुफामा प्राप्त कलाकृति ६४ हजार वर्षभन्दा पनि पुरानो रहेको छ ।
ब्रिटेनको साउथंप्टन यूनिवर्सिटीको पुरातत्वविद क्रिस स्टैंडडिशले भने,’ हाम्रो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि दुनियाको सबैभन्दा पुरानो गुफा कलाकृति हो । यो पेन्टिंग आधुनिक मानव यूरोप पुग्नुभन्दा बीस हजार वर्ष अघि नै बनिसकेको थियो। यसबाट साबित हुन्छकि यसलाई मानवले नभईकन्, हाम्रो पूर्वज निएन्डरथलले बनाएका थिए । यानी निएन्डरथल हाम्रो सोच भन्दा धेरै अगाडी विकसित थिए भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २४, २०७४१७:१२
किन पत्निमाथी शँका गर्छन पति?यस्ता ५ कारण!!
पापीहरुलाई सवक सिकाउन बनाइएको बुद्धिस्ट हेल पार्क आफैमा एक नर्क ! [तस्विर सहित]
स्तन छोप्ने आयो यस्तो नयाँ अनौठोको ट्रेन्ड
दुर्लभ रोगले थालिएका यी व्यक्ति बने हात्ती ! यस्तो छ उनको दुखदायी कहानी !
गज्जबको छ यहाँको प्रहरी: फोन बन्द हुने बित्तिकै परेवामार्फत यसरी पठाउछ्न् सन्देश!
संसारको एकमात्र देश जहाँ महिलाहरुले पुरुषमाथि हैकम जमाउने गर्छन् !
विमान उड्दा-उड्दै पाइलट गहिरो निन्द्रामा परेपछि…